, श्रीमानकै सहयोगमा महिलाले परपुरुषसँग यौनसम्पर्क गर्दै !
श्रीमानकै सहयोगमा महिलाले परपुरुषसँग यौनसम्पर्क गर्दै !
17000 पटक पढिएको
एजेन्सी । इन्डोनेसियामा परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्नका लागि महिलाहरुलाई आफ्नै श्रीमानले सहयोग गर्दछन् । परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध गर्नका लागि महिलाहरुको श्रीमानले राजीखुसी उनीहरुलाई सहयोग गर्ने गर्दछन् ।
यस्तो परम्पराले इन्डोनेसियामा भित्रैदेखि जरा गाडेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । त्यहाँ हरेक वर्ष महिलाहरूले अपरिचित पुरुषसँग यौनसम्पर्क कायम राख्छन् । यो चलन १६ औं शताब्दीदेखि चलिआएको छ ।
इन्डोनेसियाको पोन नामक पर्वमा महिला तथा पुरुषहरू माउन्ट केमुकस पुग्छन् । त्यहाँ महिलाहरूले आफूलाई मन पर्ने कुनै अपरिचित पुरुषको खोजी गर्छन् अनि मनले खाएको पुरुष फेला परे सहमतिमा यौनसम्पर्क राख्छन् । हरेक ३५ दिनमा जब यो पर्व आयोजित हुन्छ, महिलाहरूले सोही पुरुषसँग यौनसम्पर्क गर्नुपर्छ ।
लगातार सात पटकसम्म महिलाले उक्त पुरुषसँग यौनसम्पर्क गरेपछि महिलाको मनको इच्छा पूरा हुने जनविश्वास छ । यो पर्वसँग एउटा अनौठो कथा जोडिएको छ ।